စွဲ - Orbitofrontal Cortex (၂၀၀၀) တွင်မလှုပ်မယှက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မောင်းနှင်ခြင်းရောဂါ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
စွဲ: အ Orbitofrontal Cortex (2000) ၏တစ်ဦးက compulsive ၏ရောဂါနှင့် Drive ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု
မှတ်ချက်များဤစွဲလမ်းမှုသည်တိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်မှုအပေါ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းသည်တွန်းအားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု၊
FULL ဆန်းစစ်ချက်: စွဲမှု: အ Orbitofrontal Cortex တစ် compulsive ၏ရောဂါနှင့် Drive ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု
Cereb ။ cortex (2000) 10 (3): 318-325 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 10.3.318
Nora ဃ Volkow1,3 နှင့်ဟန္နအက်စ် Fowler2
2Chemistry ဦးစီးဌာနများ, Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း, Upton, နယူးယော့ 11973 နှင့်
စိတ်ရောဂါကုသမှု, SUNY-သည် Stony Brook, Stony Brook တွင်, နယူးယော့ 3, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ 11794Department
ပုံမှန်ကနေစွဲလမ်းအပြုအမူဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲကိုနားလည်ခြင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏သီအိုရီမှဗဟိုပါပြီပေးသောဆုလာဘ်ဆားကစ် (နျူကလိယ accumbens, amygdala), နေစဉ်, မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ရန်အရေးပါဖြစ်မည်အကြောင်း postulate, အစွဲလမ်းပြည်နယ်မှာလည်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့် drive ကိုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဆားကစ်၏နှောင့်အယှက်ပါဝငျသညျ။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအလယ်တန်းဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း dopaminergic တက်ကြွစွာ striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်မှတဆင့် orbitofrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်ပြုလုပ် postulate ။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့သည် orbitofrontal cortex ဟာ striatum အတွက် dopamine D2 receptors တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်မှအချိုးအစားအတွက် hypoactive ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းပုံရိပ်လေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမကြာမီနောက်ဆုံးကင်းအသုံးပြုမှုကိုအပြီးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တဏှာစဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးကြသောအခါမတူဘဲသည်, orbitofrontal cortex ဟာတဏှာ၏ပြင်းထန်မှုမှအချိုးအစားအတွက် hypermetabolic ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex drive ကိုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဆိုသောကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုပင်ပျြောမှေ့စမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမှသည်းခံစိတ်နဲ့ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ပေါ်အဘယ်ကြောင့်, အစွဲဘာသာရပ်အတွက်၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သော activation ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဒါကမော်ဒယ်နှုန်း se အပျော်အပါးအတွက် drugaddicted ဘာသာရပ်နှင့် striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ activation နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်မူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်ကြောင်း compulsive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောကျမဟုတျကွောငျးဆိုလို။
မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်သုတေသနအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအခြေခံသည့်ယန္တရားအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာသုတေသနမူးယစ်ဆေးအားဖြည့်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အာရုံခံဆားကစ်နှင့် neurotransmitters ၏မှတ်ပုံတင်မှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ဖို့အထူးသဖြင့်ဆီလျော်၏ dopamine (DA) စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA တိုးမြှင့်ဖို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစွမ်းရည် (နျူကလိယ accumbens, amygdala) သူတို့၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးပါကြောင်းကို postulated ခဲ့ပြီး (Koob နှင့် Bloom, 1988; Pontieri et al, 1996 ။ ) ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအများကြီးလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စဉ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်နှုန်း se အဆိုပါ compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်စွဲဘာသာရပ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှင်းပြအတွက်မလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်, ကနဦးမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ကာမဂုဏ်ကိုခဏတုံ့ပြန်မှုမှသည်းခံစိတ်ရှိတောင်မှအခါ, မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ် (Fischman et al ။ , 1985) နှင့်တခါတရံတွင်ပင်ဆိုးရွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများ (Koob နှင့် Bloom, 1988) ၏ရှေ့တော်မှောက်၌တည်၏။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစွဲဟာ DA စနစ်နှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှအလယ်တန်းမူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက်အကျိုးကိုဆားကစ်ပြောင်းလဲမှုများ၏ရလဒ်ကြောင်း postulated ခဲ့ပြီး (Dackis နှင့်ရွှေ, 1985; EppingJordan et al, 1998 ။ ) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ပျြောမှေ့စတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိသောသူတို့အားထက်အခြားဦးနှောက်ဆားကစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုထက်အခြားဆားကစ် (s) ကိုစွဲလမ်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကြောင့်လူသားတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တံခါးသော့ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်အခြားအပြုအမူတွေ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမူးယစ်ဆေးယူဖို့ပြင်းထန်သော drive ကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် (American Psychiatric Association, 1994) ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် drive ကိုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဆားကစ်နှင့် perseverative အပြုအမူတွေကိုမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်း postulate ။ ပိုများသောအထူးသကျနော်တို့နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလယ်တန်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း DA ဆွ drive ကို (Stuss နှင့် Benson, 1986) ကိုထိန်းညှိမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆားကစ်သော striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်မှတဆင့် orbitofrontal cortex ၏နှောင့်အယှက်မှဦးဆောင်သော။ postulate စွဲဘာသာရပ်များအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ၌ဤတိုက်နယ်ရလဒ်များနှင့်မသက်ဆိုင်သည်၎င်း၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏မူးယစ်ဆေးရယူဖို့နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ပုံကြီးချဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဒါဟာအယူအဆ striatal ၏နှောင့်အယှက်ဖေါ်ပြခြင်းပုံရိပ်လေ့လာမှုများ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် thalamic နှင့် orbitofrontal ဦးနှောက်ဒေသများအားဖြင့် corroborated ဖြစ်ပါတယ် (Volkow et al ။ , 1996a) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပု orbitofrontal cortex နှင့်ကိုကင်းနှင့်အရက်စွဲ၏လေ့လာမှုများအပေါ်အဓိကအားအာရုံသူတို့အားလေ့လာမှုများအကျဉ်းချုပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းအခြေအနေ (စွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာသော orbitofrontal cortex ၏ခန္ဓာဗေဒ, function ကိုနှင့်ရောဂါဗေဒ၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်ထောက်ပံ့ပြီးသတိနှစ်ခုလုံးကိုအမှီ ပြု. ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ (တဏှာ, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, မူးယစ်ဆေးအတွက်အဆက်မပြတ်) ၏အသစ်ကမော်ဒယ်နှင့်သတိလစ်ဖြစ်စဉ်များအဆိုတင်သွင်း မြျှောလငျ့, compulsive, Impulse, obsessive) ကို striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်ရာ။
စွဲလမ်းမှုမှသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဟာ Orbitofrontal Cortex ၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ရာထူးအမည်
အဆိုပါ orbitofrontal cortex neuronatomicaly အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောအထူးသသည်နျူကလိယအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်စဉ်းစားသော, accumbens (Koob နှင့် Bloom, 1988; ။ Pontieri et al, 1996), စီမံကိန်း orbitofrontal cortex ဖို့ thalamus ၏ mediodorsal နျူကလိယမှတဆင့် ( ray နှင့်စျေး, 1993) ။ အလှည့်၌, orbitofrontal cortex ဟာနျူကလိယ accumbens မှသိပ်သည်းစီမံချက်များထောက်ပံ့ (Haber et al ။ , 1995) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex လည်းမူးယစ်ဆေးအားဖြည့်သက်ရောက်မှု (Koob နှင့် Bloom, 1987) နဲ့ဆက်စပ် DA နျူကလိယဖြစ်သည့် ventral tegmental ဧရိယာ (Oades နှင့် Halliday, 1988) တွင် DA ဆဲလ်ကနေတိုက်ရိုက် Project, လက်ခံ၏။ Carmichael et al, 1993; ။ ထို့အပြင် orbitofrontal cortex လည်း (thalamus မှတဆင့်) ထိုသို့သော amygdala, cingulate gyrus နှင့် hippocampus (Ray နှင့်စျေး, 1995 အဖြစ်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်အခြား limbic ဦးနှောက်ဒေသများထံမှ Project, တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ) ။ ဒါက orbitofrontal cortex အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသော limbic ဒေသများထံမှသတင်းအချက်အလက်များပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကြောင့်ယင်း၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏နိုင်မယ့်ဒေသ, အလှည့်တှငျလညျးထိုအ limbic များ၏တုံ့ပြန်မှု modulate နိုင်မယ့်ဒေသမသာစေသည် မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး (ပုံ။ 1) မှဦးနှောက်ဒေသများ။
မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းများအတွက်ဆိုင်တဲ့သော orbitofrontal cortex ၏ဆက်သွယ်မှု၏ Neuroanatomic ပုံ။ VTA = ventral tegmental ဧရိယာ, NA = နျူကလိယ accumbens, TH = thalamus, OFC = orbitofrontal cortex.
Orbitofrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြုအမူများတွင် ၄ င်း၏အခန်းကဏ္ most သည်အများဆုံးဆက်စပ်မှုရှိသည်။ စတင်ရန်, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် orbitofrontal cortex သို့ဆွ electrodes ၏နေရာချထားအလွယ်တကူ Self- နှိုးဆွ (Phillips က et al ။ , 1979) ။ DA DA receptor antagonists (Phillips et al ။ , 1979) ၏အုပ်ချုပ်မှုမှပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ဤသက်ရောက်မှုများကို DA မှ modulated ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ orbitofrontal cortex, လှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက် processing အပြင် (Aou et al, 1983; Tremblay နှင့် Schulz, 1999) ကိုလည်းဤအား၏အားဖြည့်ဝိသေသလက္ခဏာများတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ရဲ့အပြုအမူကိုပြုပြင်မွမ်းမံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုသည် လှုံ့ဆော်မှုပြောင်းလဲမှု (Thorpe et al, 1983 ။ ) နှင့် stimulus- အားဖြည့်အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူခြင်း (Rolls, 1996; ။ Schoenbaum et al, 1998) ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအစားအစာ (Aou et al ။ , 1983) ကဲ့သို့သောဇီဝကမ္မအားဖြည့်ရန်အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဆေးဝါးဗေဒအားဖြည့်ဆေးဝါးများအတွက်အလားတူအခန်းကဏ္subကိုစောင့်ကြည့်ဖွယ်ရှိသည်။
လှုံ့ဆော်မှု-အားဖြည့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ပယ်ဖျက်ခံရ၏ချွတ်ယွင်းအတွက် Orbital တိုကျရိုကျ cortex ရလဒ်များဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၌၎င်း, ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏မျိုးသုဉ်းရန်ဇွဲနဲ့ခုခံဖို့ဦးဆောင် (ထောပတ် et al, 1963; ။ ဂျွန်ဆင်, 1971) ။ ဤသည်မကြာခဏတစ်ချိန်ကသူတို့ကမူးယစ်ဆေးမရှိတော့ပျြောမှေ့စချိန်မှာတောင်သူတို့ရပ်တန့်မနိုင်မူးယစ်ဆေးယူပြီးစတင်တောင်းဆိုသူကိုမူးယစ်ဆေးစွဲမှဖြစ်ပျက်၏ဆင်တူသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဘို့အဆီလျော်၏နောက်ထပ် function ကို (Tucker et al ။ , 1995) စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များအတွက် orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ က striato-cortical ဆားကစ်သူတို့လုံလောက်သောမဟုတ်သည့်အတွက်အခင်းအကျင်းအတွက်ဘုံတုံ့ပြန်မှု၏တားစီး (Marsden နှင့် Obeso, 1994) တွင်အရေးကြီးလှသည်, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလယ်တန်းအတွက် striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့် စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးရယူဖို့နဲ့ Self-စီမံခန့်ခွဲဖို့တငျထားပြင်းထန်သောလှုံ့ဆျောမှု၌တည်၏။
သို့သော်အလွန်နည်းသောတိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများသည် orbitofrontal cortex ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤဘာသာရပ်ကိုအခြားနေရာများတွင်ပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် (Porrino and Lyons, 2000) ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်ယူသောအေးစက်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် orbitofrontal cortex ဆက်စပ်ကြောင်းသတိပြုပါချင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြွက်များသည်ယခင်ကကိုကင်းရရှိခဲ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မိပါက orbitofrontal cortex ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်နျူကလိယ accumbens မဟုတ် (Brown et al ။ , 1992) ။ ထို့အပြင် Orbital frontal cortex ကိုတွေ့ရှိရသောကြွက်များသည်ကိုကင်းမှအအေးခံထားသောနေရာကို ဦး စားပေးမပြပါ (Isaac et al ။ , 1989) ။ အလားတူပင် (paraventricular နျူကလိယအပါအဝင်) thalamic mediodorsal နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြည့်အပြုအမူများ (Mc Alona et al, 1993; Young and Deutch, 1998) ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးကြောင်းနှင့်ကိုကင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအုပ်ချုပ်မှုကိုလျော့ချရန်ပြသခဲ့သည် (Weissenborn et al ။ , 1998) ။ ) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေများသည်တုန့်ပြန်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ (စိတ်ဖိစီးမှု၊ ငွေကြေး၊ ဆေးထိုးအပ်၊ လမ်းများ) နှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်လူသားများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောတဏှာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည် (O'Brien et al ။ , 1998) ။ ဤတွန်းအားပေးသောတုံ့ပြန်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားပြုသူများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အထောက်အကူပြုသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် (McKay, 1999) ။
ကျနော်တို့ကိုလည်း orbitofrontal cortex ၏ activation အတွက်ကင်းရလဒ်များ Self-အုပ်ချုပ်ရေး, DA Transporter နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာသတိပြုပါချင် (Rocha et al ။ , 1998) ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်သည်ဤတိရိစ္ဆာန်များမူးယစ်ဆေး selfadministration အတွက်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသောနျူကလိယ accumbens ၏ activation နဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုနျူကလိယ accumbens သေချာပေါက် activated မပါသောအခြေအနေများအောက်တွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် orbitofrontal cortex ၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုထားသည်။
မဟုတ်မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သော်လည်း, လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလည်းအားဖြည့်အပြုအမူတွေနှင့် conditional တုံ့ပြန်မှုအတွက် orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု corroborated ပါပြီ။ ဒါဟာမဖြစ်သည့်အခါတစ်ဦးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ငွေကြေးဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်မပေးသည့်အခါဥပမာ, လူ့ဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex ၏ activation အစီရင်ခံထားသည် (Thut et al ။ , 1997), နှင့်လည်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (Hugdahl et မျှော်လင့်သည့်အခါ အယ်လ်။ , 1995) ။
လူ့ဘာသာရပ်များအတွက် Orbitofrontal Cortex ရောဂါဗေဒ
လူသားများတွင် orbitofrontal cortex နှင့် striatum ရှိရောဂါဗေဒကိုစွဲလမ်းမှုမခိုင်မာစေသည့်ရောဂါများခံစားနေရသောလူနာများတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည် (Baxter et al, 1987; Modell et al, 1989; Insel, 1992), စွဲလမ်းမှုနှင့်အပြုအမူ၏အရည်အသွေးကိုမျှဝေသော။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြုအမူများဖြစ်သော Tourette's syndrome ရောဂါရှိသူ၊ obsessions, compulsions နှင့် impulsivity တို့မှာ orbitofrontal cortex နှင့် striatum ရှိဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Braun et al ။ , 1995) ။ ထို့အပြင် orbitofrontal cortex ၏သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ့ရှိရသည့်လူနာတစ် ဦး အားမကြာခဏထောင်ချခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည့်တရားမ ၀ င်တရားမ ၀ င်သောကားငှားရမ်းခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ (Cohen et al ။ , 1999) ။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက်အကျိုးစီးပွားလည်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်အတူ thalamus implicating အစီရင်ခံစာများဖြစ်ကြသည်။ မှတ်သားဖွယ် thalamus ထဲထညျ့လျှပ်လှုံ့ဆော်ဖို့နှင့်အတူလူနာအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော Self-stimulation ဖော်ပြလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်များမှာ (Schmidt က et al, 1981; ။ Portenoy et al, 1986 ။ ) ။ ဒီလိုလူနာအတွက် compulsive selfstimulation စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မြင်ပြီ compulsive မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆင်တူအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
စွဲလမ်းနှင့်အတူပါဝင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအများစုဟာဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုင်းတာရန်, 2deoxy-2- [18F] fluoro-D-ဂလူးကို့စ, ဂလူးကို့စတစ်ခု Analog စနှင့် တွဲဖက်. positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ဦးနှောက် function ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောကြောင့်, ဤနည်းဗျူဟာမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး၏ function ကိုအဖြစ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ပြောင်းလဲပစ်သောဦးနှောက်ဒေသမြေပုံခွင့်ပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် function ကိုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်စာပေးစာယူ၏မှတ်ပုံတင်ဖွ ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော receptors, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်ဇိုင်းတွေအဖြစ် DA neurotransmission နှင့်အခြား neurotransmitters ၏များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောမော်လီကျူးပစ်မှတ်, ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ။ အဆိုပါ positron ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများကနေအတော်လေးနိမ့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိုးပေးထားသောဘာသာရပ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမော်လီကျူးပစ်မှတ်၏တိုင်းတာခြင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကိုကင်းစွဲအတွက် imaging လေ့လာရေး
Detoxification စဉ်အတွင်း Orbitofrontal Cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်
detoxification အပြီးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်လေ့လာရေးကင်းချိုးဖောက်မှုများနှင့်အရက်ဘာသာရပ်များအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ပြီ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏အမှု၌ဤလေ့လာမှုများအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းစဉ်အတွင်း (နောက်ဆုံးကိုကင်းသုံးစွဲမှု 1 သီတင်းပတ်အတွင်း) ကို orbitofrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်ဇီဝြဖစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းပြသကြပါပြီ (Volkow et al ။ , 1991) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်သိသိသာသာတဏှာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်; အဆိုပါဇီဝြဖစ်ခြင်း, တဏှာပိုမိုပြင်းထန်သောမြင့်။
ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့ Non-အလွဲသုံးစားလုပ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်သောအခါ, orbitofrontal cortex နဲ့ anterior cingulate gyrus အပါအဝင်အများအပြားတိုကျရိုကျဒေသများအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချခဲ့ (Volkow et al ။ , 1992) ။ ဤရွေ့ကားလျှောက်လျော့နည်းဘာသာရပ်များကနဦး detoxification ကာလပြီးနောက် re-စမ်းသပ်ပြီး 3-4 လအတွင်းခဲ့ကြသည်လျှင်ပင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
Dopamine နှင့် Orbitofrontal Cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်
အဆိုပါ detoxified ကင်းချိုးဖောက်သည့် orbitofrontal cortex နဲ့ anterior cingulate gyrus ၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့် DA ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများမှဖြစ်လျှင်စမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ DA D2 receptors နှင့်ဒေသတွင်းဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ, (နောက်ဆုံးကိုကင်းသုံးစွဲမှု 1 တစ်လအတွင်း) ကိုကင်းချိုးဖေါက်မှုများ striatum အတွက်သိသိသာသာနိမ့် DA D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ပြသနှင့်ဤလျှော့ချ detoxification ပြီးနောက် 3-4 လအတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ striatal D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အတွက်နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်လျော့ကျ (Volkow et al ။ , 1993a) ကို orbitofrontal cortex နဲ့ anterior cingulate gyrus အတွက်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းသွားသည်။ D2 receptors ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုအတူဘာသာရပ်များသည်ဤဦးနှောက်ဒေသများ (ပုံ။ 2) တွင်နိမ့်ဆုံးဇီဝဖြစ်စဉ်တန်ဖိုးများကိုပြသခဲ့သည်။
detoxified di striatum အတွက် striatum အတွက် cingulate gyrus အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ် (r = 0.64, df 24, P <0.0005) နှင့် orbitofrontal cortex (r = 0.71, df 24, P <0.0001) နှင့် dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှု (အချိုးအညွှန်း) အကြားဆက်ဆံရေး ကိုကာကိုလာ
striatal DA D2 receptors အတူ orbitofrontal cortex နဲ့ cingulate gyrus အတွက်ဇီဝြဖစ်၏အသင်းအဖွဲ့ striato-thalamo-cortical Project (Nauta, 1979 မှတဆင့်သည်ဤဒေသ DA ကသွယ်ဝိုက်စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရ၏။ Heimer et al, 1985; Haber, 1986) သို့မဟုတ် cortico-striatal လမ်းကြောင်း (Le Moal ရှိမုန်, 2) ကနေတဆင့် striatal DA D1991 receptors ၏ cortical စည်းမျဉ်း။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ orbitofrontal cortex နှင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် cingulate gyrus အတွက်မူလတန်းချွတ်ယွင်းဆိုလိုပေသည်သော်လည်းယခင်အမှု DA လမ်းကြောင်းအတွက်အဓိကချွတ်ယွင်းဆိုလိုပေသည်။
ကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် orbitofrontal cortex နဲ့ cingulate gyrus အတွက်ဇီဝြဖစ်အတွက်လျှော့ချကြောင့် Synaptic DA လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားလာသည်ဤဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများနောက်ပြန်သွားလျှင်အကဲဖြတ်ရန်အကျိုးစီးပွားခဲ့ D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အလေ့လာမှုတစ်ခု detoxified ကင်းချိုးဖောက်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပေါ်ပါ (psychostimulant မူးယစ်ဆေး methylphenidate ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့) DA ​​တိုး၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်းပြုလေ၏။ Methylphenidate (အမတ်) က anterior cingulate gyrus ညာဘက် thalamus နှင့် cerebellum အတွက်ဇီဝြဖစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမတ်တဏှာ၏သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်တော်မူသောအတွင်းကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများ (သို့သော်မမအဘယ်သူကိုရှိသူတို့အတွက်) အမတ်လက်ျာ orbitofrontal cortex နဲ့ညာဘက် striatum (ပုံ။ 3) တွင်ဇီဝြဖစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
methylphenidate ပြင်းထန်သောတဏှာကြောင့်မတော်မူသောတသွေးဆောင်တော်မူသောတစ်ဦးကိုကင်းအကြမ်းဖက်များ၏ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံရိပ်တွေ။ လက်ျာ orbitofrontal cortex (R ကို OFC) ၏နှင့်ပြင်းထန်သောတဏှာသတင်းပို့ဘာသာရပ်အတွက်ညာဘက် putamen (R ကိုထား) ၏ activation သတိပြုပါ။
အမတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် cingulate gyrus အတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးကင်းချိုးဖောက်သည်၎င်း၏ hypometabolism အစိတ်အပိုင်းအတွက် DA activation လျော့နည်းသွားထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, အမတ်သာတဏှာတိုးမြှင့်တော်မူသောသူများအတွက်ဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါက detoxified ကင်းချိုးဖောက်သည့် orbitofrontal cortex ၏ hypometabolic လှုပ်ရှားမှုဆိတ်ကွယ်ရာ DA (ဆိုလိုသည်မှာအချိုမှု, serotonin, ဂါဘမြို့သား) မှအခြားအ neurotransmitters ၏နှောင့်အယှက်ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကိုလည်း DA တိုးမြှင်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်စဉ်က orbitofrontal cortex activate လုပ်ဖို့သူ့ဟာသူလုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ orbitofrontal cortex လှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်များ၏ salience ၏အမြင်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကပြင်းထန်သောတဏှာအစီရင်ခံကြောင်းဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex ၏ differential ကို activation အမတ်များ၏ရိပ်မိအားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်က၎င်း၏ပါဝင်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ သို့သော် orbitofrontal cortex activation လည်းနှိုးဆွ (Hugdahl et al ။ , 1995) ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပြီးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘာသာရပ်များအတွက်၎င်း၏ activation အမတ်သွေးဆောင်တဏှာအမတ်တယောက်ကိုထိုးလက်ခံရရှိဤဘာသာရပ်များအတွက်မျှော်လင့်ထင်ဟပ်နိုင်ဘယ်သူကို၌တည်၏။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမျှော်မှန်းဆုလာဘ်အချက်ပြလိုက်ခြင်းတဲ့ဆားကစ်၏ activation သတိရှိရှိတဏှာအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါသည်။ တဏှာနှင့်အတူဆက်စပ်မှုလည်းအများဆုံးဖွယ်ရှိ striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသော striato-thalamoorbitofrontal ဆားကစ် (ဂျွန်ဆင် et al ။ , 1968) မှတဆင့် orbitofrontal cortex နှင့်အတူ၎င်း၏ neuroanatomical ဆက်သွယ်မှုထင်ဟပ်။
အမတ်, ကိုကင်းဖို့ pharmacologically အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါး (Volkow et al ။ , 1995) အားဖြင့် orbitofrontal cortex ၏ activation, ကင်းသည့်စွဲဘာသာရပ်အတွက်တဏှာနှင့်နောက်ဆက်တွဲ compulsive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး elicits ပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားများ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Orbitofrontal Cortex နှင့်ကင်းတပ်မက်
အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ Hyperactivity ကင်းတဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ မကြာမီနောက်ဆုံးကင်း၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်တဲ့အခါမှာပါလီမန်အမတ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တဏှာ၏ပြင်းထန်မှုတစ်ခုတိုးလာမှုအပြီးစမ်းသပ်ပြီးကင်းချိုးဖောက်မှုများ, ယခင်အပိုင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ activation လည်းကင်းတဏှာထုတ်ယူနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း activated လာခဲ့တဲ့ဦးနှောက်ဒေသများအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းလေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုကိုကင်းတဏှာများအတွက်ကင်းဆောင်ပုဒ်အင်တာဗျူး (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဘို့ကိုကင်း၏ပြင်ဆင်မှု) ကရူးနှမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါကင်းဆောင်ပုဒ်အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းဒေသတွင်းကဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တဲ့ကြားနေဆောင်ပုဒ်အင်တာဗျူး (မိသားစု genogram) စဉ်အတွင်းကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကင်းဆောင်ပုဒ်အင်တာဗျူးသိသိသာသာ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြားနေဆောင်ပုဒ်အင်တာဗျူး (ဝမ် et al ။ , 1999) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ထားခဲ့တယ်။ အဆိုပါ amygdala အတွက် activation အပြင်မှာရှိတဲ့ orbitofrontal cortex ၏ဇီဝြဖစ်တိုးတက် prefrontal cortex နဲ့ cerebellum လည်းစွဲလမ်းထုတ်ယူနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကင်းမြင်ကွင်းများတစ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုအသုံးပြုမယ့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံခဲ့သည် (Grant က et al ။ , 1996) ။
သို့သျောလညျးကိုကင်းတဲ့ဗီဒီယိုတိတ်ခွေတုံ့ပြန်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (CBF) တွင်အပြောင်းအလဲများတိုင်းတာမယ့်လေ့လာမှုစွဲလမ်းနေစဉ်အတွင်း orbitofrontal cortex ၏ cingulate gyrus နှင့် amygdala ပေမယ့်မ activation ဖော်ပြခဲ့သည် (Childress et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ activation detect လုပ်ဖို့ကဒီပျက်ကွက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
Dopamine စိတ်ကြွဆေး, အ Thalamus နှင့်ကင်းတပ်မက်
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ [11C] raclopride, အဘယ်သူ၏ binding အဆိုပါ DA D2 အဲဒီ receptor မှ endogenous DA (Ross နဲ့ဂျက်ဆင်, 1989 နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံတစ် ligand သုံးပြီးပေနှင့်အတူစုံစမ်းစေနိုင်ပါတယ်; Seeman et al, 1989; ။ Dewey et al ။ , 1992) ။ ဒါက [11C] raclopride pharmacological ကြားဝင် (ဆိုလိုသည်မှာအမတ်, စိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်း) ကသွေးဆောင်၏ binding ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ [11C] raclopride binding သောကြောင့်အလွန်အမင်း reproducible ဖြစ်ပါတယ် (Nordstrom et al, 1992; ။ ။ Volkow et al, 1993b) ဤလျှော့ချအဓိကအားမူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန် Synaptic DA ပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်။ အဆိုပါ DA Transporter ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် DA တိုးပွါးသောအမတ်၏ဖြစ်ရပ်ဘို့သတိပြုပါ (ကူးတို့ et al ။ , 1972), DA အတွက်အပြောင်းအလဲများကို Transporter ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အဆင့်ဆင့်၏ဒါပေမယ့်လည်းဖြန့်ချိကြောင်း DA ပမာဏကိုမသာ function ကိုဖြစ်ကြသည် ။ DA Transporter ပိတ်ဆို့အလားတူအဆင့်ဆင့်ဘာသာရပ်များ၏အုပ်စုနှစ်စုကိုဖြတ်ပြီးသွေးဆောင်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် [11C] raclopride ၏စည်းနှောင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့် DA များလွှတ်ပေးရေးအတွက်ကွဲပြားမှုမှအများစုဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ကျန်းမာလူ့ဘာသာရပ်များအတွက် striatal DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျော့နည်း (Volkow et al ။ , 1994) လည်းမရှိအိုမင်းနှင့်အတူပြသခဲ့ပြီးဒီမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်း။
ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအမတ်ဖို့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် [11C] raclopride အဆိုပါကင်းချိုးဖောက်သည့် striatum အတွက် binding အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်လျှော့ (Volkow et al ။ , 1997a) လျော့နည်းထိန်းချုပ်မှုတွင်တွေ့မြင်ကြောင်း၏ထက်ဝက်ထက်ကြ၏။ ထင်ရှား ဆနျ့ကငျြ, အကင်းချိုးဖောက်ပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အမတ်သိသိသာသာ thalamus (ပုံ။ 11a) တွင် [4C] raclopride ၏စည်းနှောင်လျော့နည်းသွားမဟုတ်ပါဘူး။ [11C] က thalamus အတွက် binding raclopride ပေမယ် striatum အတွက်, တဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများတွင်အမတ်-သွေးဆောင်တိုး (ပုံ။ 4b) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကြဘူး။ အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်း အဆိုပါ thalamus ၏ DA innervation အသီးသီး mediodorsal နှင့် orbitofrontal cortex နဲ့ cingulate gyrus မှ relay ကိုအရေးပါသော paraventricular အရေးပါ, (Groenewegen, 1988) ကိုအဓိကအားဖြင့်ကန့်သတ်ချိန် မှစ. , နှင့် thalamus အတွက်ကိုကင်းနှင့်အမတ်များ၏စည်းနှောင်သိသိသာသာရှိစဉ်ကတည်းကဤသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခဲ့သည် (ဝမ် et al, 1993; ။ ဒနှင့် Kaufman, 1994) ။ ဒါဟာအစသာမန်ထိန်းချုပ်မှုဘာမှအဆိုပါစွဲဘာသာရပ်များအတွက်သညျ့တိုးမြှင် thalamic DA လမ်းကြောင်းမှထောက်ပြမယ်ဆိုရင်သော thalamus အတွက်တုံ့ပြန်မှု, မပြခဲ့ဘူးသော intriguing ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တ DA thalamic လမ်းကြောင်း၏စွဲဘာသာရပ်ပုံမှန်မဟုတ်သော activation (ယူဆရ mediodorsal နျူကလိယ) အတွက် orbitofrontal cortex ၏ activation ဖွသောယန္တယားများ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းထင်ကြေးနိုင်ဘူး။
(က) methylphenidate (MP) ၏သက်ရောက်မှုသည် thalamus (Bmax / Kd) ရှိ [11C] raclopride ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကိုကင်းကျူးလွန်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ (ခ) ကိုပါကျူးလွန်သူများ၌စွဲလမ်းနေသည့် Self-report များ၌ thalamus ရှိ Bmax / Kd တွင်ပါ ၀ င်သည့် Bmax / Kd ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အမတ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများ (r = 61, df, 19, P <0.005) အကြားဆက်ဆံရေး။
ကင်းချိုးဖောက်မှုများအတွက် Imaging ကလေ့လာရေးအကျဉ်းချုပ်
imaging လေ့လာမှုများကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် striatum, thalamus နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်မူမမှန်သည့်အထောက်အထားပေးပါပြီ။ အဆိုပါ striatum ခုနှစ်တွင်ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ DA D2 receptors တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းခြင်းအဖြစ် DA တစ်တုံးလွှတ်ပေးရန်နှစ်ဦးစလုံးကိုပြ။ အဆိုပါ thalamus ခုနှစ်တွင်ကင်းချိုးဖေါက်မှုများ DA thalamic လမ်းကြောင်းတစ်ခုတိုးမြှင် Response ပြသပါ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex ခုနှစ်တွင်ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများမကြာမီကင်း၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုကိုအပြီးနှင့်လည်း striatal DA D2 receptors အတွက်လျှော့ချနှင့်ဆက်နွယ်သောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစမ်းသပ်မှုတွေအသွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် hypoactivity, စဉ်အတွင်း hyperactivity ပြသပါ။ ကျနော်တို့ cingulate gyrus ၏ hypoactivity မှဦးဆောင်နှင့် orbitofrontal cortex ၏အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုလျော့နည်းသွား activation အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့် DA D2 receptors ရလဒ်များကိုအတွက် striatal လျှော့ချရေးကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရက်ထဲမှာ imaging လေ့လာရေး
detoxification စဉ်အတွင်းအရက်ဘာသာရပ်များအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်အများအပြားလေ့လာမှုများထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုအများစုသည်အရက်သောက်သောဘာသာရပ်များတွင်ရှေ့နောက်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးရှေ့နောက် cingulate gyrus နှင့် orbitofrontal cortex တို့ကိုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများသည်အရက် detoxification နှင့်အတူဇီဝြဖစ်ပျက်မှုများ၏အခြေခံကျသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုပြသသော်လည်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအရက်သမားများသည် Orbitofrontal cortex နှင့် anterior cingulate gyrus တွင်ဇီဝြဖစ်စဉ်သိသိသာသာနိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်သည် (Volkow et al ။ , 1997b) ။ အလားတူပင်တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography နှင့်အတူဖျော်ဖြေလေ့လာမှုများ detoxification စဉ်အတွင်းအရက်သမားဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex အတွက် CBF အတွက်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့ကြသည် (Catafau et al ။ , 1999) ။ orbitofrontal cortex အပြောင်းအလဲများ detoxification ပြီးနောက် 2-3 လ (ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်) (Volkow et al ။ , 1997b) သူတို့အရက်ကနေဆုတ်ခွာတဲ့ function ကိုမဟုတ်ပေမယ့်ရှည်လျားသောရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုကိုယ်စားပြုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကြွက်များတွင်အရက်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်သည် Orbital တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အာရုံခံယိုယွင်းစေပါတယ် (Corso et al ။ , 1998) ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရက်သမားအတွက် orbitofrontal cortex အတွက်မြဲ hypometabolism အရက်သမားအတွက် orbitofrontal cortex အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတက်တတ်၏။
အဆိုပါ striato-thalamo-orbitofrontal ၏နှောင့်အယှက်လည်း (Model et al ။ , 1990) ရက်အတွင်းထိန်းချုပ်၏တဏှာနဲ့အရှုံးအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာပေလေ့လာမှုများအရက်သမားအတွက် DA D2 receptors အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့် (Volkow et al ။ , 1996b), အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှု D2 receptors အတွက်လျှော့ခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများအကြားတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းရှိလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပြုထားပြီး အရက်ဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex ၌တည်၏။
သော်လည်း DA (El-Ghundi et al ။ , 1998) အရက်၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက်ဆီလျော်သည်အခြား neurotransmitters အတွက်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ (opiates, NMDA, serotonin, ဂါဘမြို့သား) ကိုလည်း 1996, Lewis က (၎င်း၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းသက်ရောက်မှု်ပတ်သက်နေကြပြီ ) ။
ဂါဘမြို့သားများနှင့် Orbitofrontal Cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်
ဂါဘမြို့သား neurotransmission အပေါ်အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်အရက်ဂါဘမြို့သား neurotransmission နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လူသားများအားဖြင့်စော်ကားသည့်ဆေးများမှာအတွက်အထူးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအရက်စွဲလျော့နည်းသွားဂါဘမြို့သားဦးနှောက် function ကို (Coffman နှင့်အသေးသုံးငွေ, 1985) ၏ရလဒ်ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဂါဘမြို့သားဦးနှောက် function ကိုပြောင်းလဲမှုများရက်ဘာသာရပ်များအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပုံကိုရှင်းလင်းသည်။ ပေ benzodiazepines -since တစ် benzodiazepine မူးယစ်ဆေးနဲ့စူးရှသောစိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဒေသတွင်းဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဂါဘမြို့သား system ကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, အရက်ကဲ့သို့လည်းဦးနှောက် (Hunt က, 1983) တွင်ဂါဘမြို့သား neurotransmission လွယ်ကူချောမွေ့ - နှင့်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ benzodiazepine receptors ၏အာရုံစူးစိုက်မှု။
မကြာသေးမီက detoxified အရက်ဘာသာရပ်များအတွက် lorazepam ဖို့ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ Lorazepan (Volkow et al ။ , 1993c) ပုံမှန်နှင့်အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်တူညီသောအတိုင်းအတာအထိမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်လျော့နည်းစေပါသည်။ သို့သော်အရက်ဘာသာရပ်များ thalamus, striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ထိန်းချုပ်မှုထက်တုံ့ပြန်မှုသိသိသာသာလျော့နည်းပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အစောပိုင်း detoxification စဉ်အတွင်းအရက်သမားအတွက် striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ် (နောက်ဆုံးအရက်အသုံးပြုမှုကိုအပြီး 2-4 ရက်သတ္တပတ်) မှာ inhibitory neurotransmission တစ်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုသောဤကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေတုံ့ပြန်မှုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး detoxification နှင့်အတူပုံမှန်မှအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်။ ဒီလေ့လာမှုကထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအရက်သမားဟာ orbitofrontal cortex တစ်တုံးတုန့်ပြန်ခဲ့ (detoxification ပြီးနောက် 8-10 ရက်သတ္တပတ်) ပင်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာကြောင်း detoxification ပြသ (Volkow et al ။ , 1997b) ။ ဒါက orbitofrontal cortex ၏ hyporesponsivity အရက်ဆုတ်ခွာ့ function ကိုမဟုတျပါဘူးဒါပေမဲ့အရက်သမားအတွက် inhibitory neurotransmission မှ sensitivity ကိုတစ်ဦးဒေသတွင်းတိကျတဲ့ကျဆင်းခြင်းရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အရက်သေစာများ၏ orbitofrontal cortex အတွက်ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများအတွက် GABA ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားကိုလည်း [3I] Iomazenil သုံးပြီး detoxified အရက်အလွဲသုံးစားလုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲမှာ benzodiazepine receptors ၏အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုကထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုက detoxified အရက်သမားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ orbitofrontal cortex အတွက် benzodiazepine receptors ၏အဆင့်သိသိသာသာလျှော့ချခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Lingford-Hughes et al ။ , 123) ။ orbitofrontal cortex ရှိ benzodiazepine receptors အဆင့်လျော့နည်းခြင်းသည်အရက်သမားများရှိဤ ဦး နှောက်ဒေသရှိ lorazepam အုပ်ချုပ်မှုအတွက် lorazepam အုပ်ချုပ်မှုအတွက်ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ တ ဦး တည်း GABA neurotransmission မှလျှော့ချ sensitivity ကိုတစ်အကျိုးဆက်သည်ဤဘာသာရပ်များအတွက် orbitofrontal cortex ၏ activation ရပ်စဲဖို့ inhibitory အချက်ပြမှုများများ၏စွမ်းရည်ကိုတစ် ဦး ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း postulate နိုင်ပါတယ်။
serotonin နှင့် Orbitofrontal Cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်
အဆိုပါ orbitofrontal cortex သိသိသာသာ serotonergic innervation (Dringenberg နှင့် Vanderwolf, 1997) အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်အရှင်မူမမှန်လည်းဒီဦးနှောက်ဒေသ၏ပုံမှန်မဟုတ်သော function ကိုအထောက်အကူပြုနိုင် serotonin ။ ဒီအမှုဖြစ်မည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအရက်သမားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်, m-chlorophenylpiperazine (mCPP) အားတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရောထွေး serotonin agonist / ရန်မူးယစ်ဆေးဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာမယ့်လေ့လာမှုများကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။ ဒီလေ့လာမှုကထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ thalamus အတွက် mCPP-သွေးဆောင် activation, orbitofrontal cortex, caudate နှင့်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus သိသိသာသာအရက်သမားအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သ (Hommer et al ။ , 1997) ။ ဒါကအရက်သမားတစ်ဦး hyporesponsive striato-thalamo-orbitofrontal circuit ကိုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ mCPP ဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုအရက်လူနာအတွက်ဒီ circuit ကိုများ၌တွေ့မြင်မူမမှန်အတွက် serotonin စနစ်၏တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုထားသည်။ ဒီထောက်ခံမှုအတွက်အရက်ဘာသာရပ်များ၏ mesencephalon အတွက် serotonin ဆိပ်ကမ်းများအတွက်အမှတ်အသားများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရသော serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျှော့ချ, ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (Heinz et al ။ , 1998) ။ ဤအမှု၌ကြောင့် serotonin reuptake inhibitor မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသတိပြုပါရန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် (Balldin et al ။ , 1994) ရက်ဘာသာရပ်များအတွက်အရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေပါတယ်ထိရောက်သောဖြစ်ပြပြီ။
အရက်ထဲမှာ Imaging ကလေ့လာရေးအကျဉ်းချုပ်
imaging လေ့လာမှုများအရက်သမားအတွက် striatum, thalamus နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်မူမမှန်သည့်အထောက်အထားပေးပါပြီ။ အဆိုပါ striatum ခုနှစ်, thalamus နှင့် orbitofrontal cortex အရက်သမား GABAergic သို့မဟုတ်ဤတိုက်နယ်အတွင်းရှိ hyporesponsiveness ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ serotonergic ဆွဖြစ်စေမယ့်တုံးဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ detoxified အပြင်အရက်သမားလည်း orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်, စီးဆင်းမှုနှင့် benzodiazepine receptors အတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမူမမှန်ထို့ကြောင့် GABAergic အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲများနှင့် serotonergic လှုပ်ရှားမှုထဲမှာထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
ဒရိုက်ဗ်၏ရောဂါနှင့် compulsive အပြုအမူအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာ
ဤတွင်ကျနော်တို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့သည့် striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ function ကို disrupts ကြောင်း postulate ။ အဆိုပါစွဲဘာသာရပ်ဟာ (သတိရှိရှိတဏှာအဖြစ်ကိုရိပ်မိ) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် compulsive ကိုယ်ပိုင်ရရန်ပြင်းထန်သော drive ကို၌ဤတိုက်နယ်နဲ့ရလဒ်တွေကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်သောမူးယစ်ဆေးနှင့် / သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သောအခါတစ်ဦး conditional တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ဒီကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ် (သတိရှိရှိထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကိုရိပ်မိစ) မူးယစ်ဆေးဝါး၏အုပ်ချုပ်မှု။ စွဲလမ်း၏ဤပုံစံအပျြောအပါး၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အမြင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ကနဦးအဆင့်တွင်အဘို့ပေမယ့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအပျော်အပါးနှုန်း se အတူ compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုများအတွက်အကောင့်မပေးနိုငျသောအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောကြောင်း postulates ။ ယင်းအစား perseverative အပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသော striatothalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အ compulsive စားသုံးမှုတွက်သည်။ ကျနော်တို့ပျြောမှေ့စတုံ့ပြန်မှုနောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှုအပေါ် orbitofrontal cortex တစ်ခု activation ထုတ်ယူနိုင်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် conditional အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ကြောင်း postulate ။ တစ်ချိန်က activated အဆိုပါ orbitofrontal cortex, သတိရှိရှိတစ်ခုပြင်းထန်သောတတ်ပြီးအဖြစ်ကိုရိပ်မိဘာစေခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်သူ့ကိုပြောပြပဋိပက္ခဖြစ်သိမြင်အချက်ပြမှုများရှိစေခြင်းငှါလျှင်ပင် / သူမ၏ထိုသို့ပြုမှမဟုတ်ဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးယူမောင်းပါလိမ့်မယ်။ သူ / သူမမူးယစ်ဆေးကြာပြီးတာနဲ့မူးယစ်စဉ်အတွင်း ensues သော DA activation အပြုအမူ (မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး) ၏ဇွဲမှုကြောင့် activation တစ်ပုံစံသတ်မှတ်ပေးသော striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ activation ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သတိရှိရှိအဖြစ်ကိုရိပ်မိသော ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး။
အဆိုပါစွဲဘာသာရပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကနေအပျော်အပါးများ dissociation ရှင်းပြဖို့အသုံးဝင်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘာသာရပ်ကရွံရှာဖွယ်ပင်အခါ, မခွဲခြားဘဲ၎င်း၏အရသာမဆိုအစားအစာကိုစားလိမ့်မည်သည့်အခါကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအခွအေနမြေိုးကိုစားရန်တိုက်တွန်းအစားအစာများ၏အပျြောအပါးခြင်းဖြင့်ပေမယ့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမှပြင်းထန်သော drive ကိုမောင်းနှင်မပေးပါ။ ထို့ကြောင့်စွဲစဉ်အတွင်းနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြင်းထန်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုပြည်နယ်များအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိဖို့ထပ်တူထပ်မျှမဟုတ်အရေးတကြီးတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိနေကြကြောင်းဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အပြုအမူများ၏သေဒဏ်စီရင်သည့်စွဲဘာသာရပ်၏ဖြစ်ရပ်များ၏အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်း DA အတွက်တိုးနှင့်အတူဒွန်တွဲသည့် orbitofrontal cortex ၏နှောင့်အယှက်, အ satiation နှင့်အပြုအမူများရပ်စဲမှုလတံ့သောအဘို့ဇီဝကမ္မအရေးတကြီးတစ်ပြည်နယ်ကနေမည်သို့ပင်ကွဲပြားခြားနား မူးယစ်ဆေးမွတ်မပြေနိုင်သောနှင့် / သို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရပ်စဲမဟုတ်ကြောင်း compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ပုံစံထားကြ၏။
ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆွမရှိပဲ, striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်ဂိုးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေများအတွက်ကျဆင်းခြင်း drive ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့, hypofunctional ဖြစ်လာသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် / သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့် hyperactive မျှမူးယစ်စဉ်အတွင်းလည်းမရှိတဲ့အခါဒီ circuit ကိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း derangements ၏ပုံစံ, hypoactive, စဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သော foci ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူမြင်ပြီ derangement, ဆင်တူသည် အဆိုပါ ictal ကာလနှင့် interictal ပြည်နယ်အတွင်းမှာလျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် (Saha et al ။ , 1994) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex အတွက်ကြာရှည်မူမမှန်ဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ reactivity ပင်ဆုလာဘ်ဆားကစ် (နျူကလိယ accumbens, amygdala) ၏ activation ၏ရလဒ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေး abstinence ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအပြီးတွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းရန်တဦးတည်းဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေး-အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရန်။ တကယ်တော့ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေး (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998) မှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ reinstatement ပြသခဲ့ကြသည်။
ဒီ model ကနေရလဒ်များကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ orbitofrontal cortex အတွက်မူမမှန်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမှဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတခြား compulsive အပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ဆက်စပ်သောပြတ်တောက်ဖို့တိကျတဲ့နေသောရန်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲဘာသာရပ်များအခြား compulsive အပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အများကြီးဒေတာမရှိသျောလညျး, ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံး Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထက် compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြေးခွံထဲမှာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များရှိခြင်းသတင်းပို့ကြောင်းလေ့လာမှုများကနေတချို့သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိ (Yeager et al ။ , 1992) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများ (Ramirez et al ။ , 1983) compulsive အပြုအမူ၏အခြားရောဂါဖြစ်သည့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်မြင့်မားအရက်နှင့် / သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူတစ်အသင်းအဖွဲ့ရှိကွောငျးကိုပြသခဲ့ကြသည်။
ဤစွဲလမ်းမှု၏ပုံစံသည်ကုထုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ activation အတွက်အနိမ့်အမြင့်ကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်း၏တားစီးမှုအတွက်တံခါးခုံကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများသည်ကုထုံးအရအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ ဦး နှောက်တွင် GABA အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေသည့် anticonvulsant drug gamma vinyl GABA (GVG) သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းပြီး၊ စမ်းသပ်မှုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမသက်ဆိုင်ပါကအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ (Dewey et al ။ , 1998, 1999) ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် DA အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့ဖို့ GVG ၏စွမ်းရည်အေးစက်ရာအရပျ preference ကိုနှင့် Self- အုပ်ချုပ်မှုတားစီးအတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ် postulated ထားပြီး, ဒီမှာကျနော်တို့အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားလျော့ချဖို့ GVG ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ postulate အဆိုပါ striato-thalamo-orbitofrontal ဆားကစ်၏ activation နှင့်အတူ၎င်း၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှတဆင့်။ ထို့အပြင် striato-thalamo-orbitofrontal circuit ကို neurotransmitter (Modell et al ။ , 1990) မျိုးစုံမှထိန်းချုပ်သောကြောင့်၊ ဤလမ်းကြောင်းကို modulate ပြုလုပ်သော dopaminergic မဟုတ်သောဆေးများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဤကိစ်စတှငျ ဦး နှောက်အတွင်း serotonin အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကင်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းသွားကြောင်းသတိပြုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည် (Glowa et al ။ , 1997) ။ မူးယစ်ဆေးဝါး Self- အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် drive ကိုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက် serotonin အဖြစ်အနက်ခဲ့သည့်တွေ့ရှိချက်။
ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် striato-thalamoorbitofrontal circuit ကို ဆက်စပ်. ပုံပေါ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သော anterior cingulate gyrus, medial ယာယီအဆောက်အဦများ (amygdala နှင့် hippocampus) နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ကဲ့သို့သောအခြားဦးနှောက်ဒေသများ, လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများစွဲအတွက် orbitofrontal cortex ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်, ပိုမိုသုတေသန orbitofrontal cortex နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော thalamus အတွင်းဒေသများဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာသုတေသန Grant ကအောက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ Institute မှမပါ, စာချုပ် DE-ACO2-98CH10886 အောက်မှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအမေရိကန်ဦးစီးဌာန (ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သုတေသနရုံး) ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ DA 06891 နှင့် Grant ကအောက်မှာအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်၏ Institute မှမပါ။ AA ကို 09481 ။
Nora ဃ Volkow, MD, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန, Bldg 490, Upton, နယူးယော့ 11973, အမေရိကန်နိုင်ငံမှစာပေးစာယူနေရပ်လိပ်စာ။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Ahmed က SH, Koob gf (1998) အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှေူပာင်းလဲရေး: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ 282: 298-300 ။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (1994) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုအတွက်စာရင်းအင်းကို manual ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association ။
မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်ဆုလာဘ်-related အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ် catecholamines ၏ Aou S က, Oomura Y ကို, Nishino H ကို, Inokuchi တစ်ဦးက, Mizuno Y ကို (1983) သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res 267: 165-170 ။
Balldin J ကို, Berggren ဦး, Bokstrom K ကို Eriksson M က, Gottfried CG, alcoholdependent လူနာ Zimelidine နှင့်အတူ Karlsson ငါ Walinder J ကို (1994) ခြောက်လအတွင်းပွင့်လင်းရုံးတင်စစ်ဆေး: အရက်စားသုံးမှု၏လက်ထက်ကာလ၌လျှော့ချရေး။ 35-245: မူးယစ်ဆေးအရက် 248 မူတည်တယ်။
Baxter LR, Phelps ME, obsessive compulsive ရောဂါအတွက် Mazziotta J ကို (1987) ဒေသခံနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းထားများ: ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှုန်းထားများနဲ့နှိုင်းယှဉ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiat 44: 211-218 ။
Braun AR, Randolph C, Stoetter B, Mohr E, Cox C, Vladar K, Sexton R, Carson RE, Herscovitch P, Chase TN (1995) Tourette's Syndrome ၏အလုပ်လုပ်သော neuroanatomy: FDG-PET လေ့လာမှု။ II ကို: ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူနှင့်ရောဂါ၏သိမှုအင်္ဂါရပ်များအကြားဆက်ဆံရေး။ Neuropsychopharmacology 13: 151-168 ။
forebrain limbic အဆောက်အဦများ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ်ကင်း-တွဲပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့အောက်ပါခြွင်းချက်အာရုံခံ activation များအတွက်ဘရောင်း EE, Robertson က GS, Fibiger HC (1992) အထောက်အထား။ neuroscience 12: 4112-4121 ။
ထောပတ် CM, Mishkin M က, Rosvold HE မျောက်တွေကိုအတွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏ရွေးချယ် ablations ပြီးနောက်အစားအစာဆုခခြံတုံ့ပြန်မှု (1963) အခြေအနေများနှင့်မျိုးသုဉ်း။ Exp Neurol 7: 65-67 ။
9 ။ ဟာ Macaque မျောက်အတွက် Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ Carmichael ST, စျေး JL (1995) Limbic ဆက်သွယ်မှု။ comp Neurol 363: 615-641 ။
Catafau လေး, Etcheberrigaray တစ်ဦးက, detoxification စဉ်အတွင်း naltrexone စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နာတာရှည်အရက်စွဲလူနာများတွင် Perez de los Cobos J ကို, Estorch M က, Guardia J ကို, Flotats တစ်ဦးက, Berna L ကို, Mari အဘိဓါန်ကို C, CASA M က, Carrio ငါ (1999) ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများ ။ J ကို Nucl Med 40: 19-24 ။
cue- သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Childress AR, Mozley PD, McElgin W, Fitzgerald J, Reivich M, O'Brien CP (1999) Limbic activation ။ နံနက် J ကို Psychiat 156: 11-18 ။
နာတာရှည်အရက်သမားအတွက် Coffman, ဂျာအသေးသုံးငွေက F (1985) Plasma ဂါဘမြို့သားအဆင့်ဆင့်။ နံနက် J ကို Psychiat 142: 1204-1205 ။
Cohen ကို L ကို, Angladette L ကို, Benoit N ကို, Pierrot-Deseilligny ကို C (1999) ကားများငှားရမ်းသူ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 353: 34 ။
Corso TD, Mostafa HM, Collins ကနေ MA, ကြွက်များတွင် Episode အရက်သေစာမူးယစ်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Neafsey EJ (1998) ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်ယိုယွင်း: nimodipine ၏ဆိုးကျိုးများ, 6,7-dinitro-quinoxaline-2,3-Dion နှင့် MK-801 ။ အရက် Clin Exp Res 22: 217-224 ။
Dackis, CA, ရွှေက MS (1985) ကိုကင်းစွဲအတွက်နယူးသဘောတရားများ: အ dopamine တွေပျက်စီးမှုအယူအဆ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 9: 469-477 ။
1992C- နှင့်အတူ Vivo အတွက်တိုင်းတာ endogeneous dopamine လွှတ်ပေးရေး Dewey SL, Smith က GW, Logan J ကို, Brody JD, ဝေကိုက်, Ferrieri RA ဘုရင် P ကို, MacGregor R ကိုမာတင် PT, Wolf ကအေပီ, Volkow ND, မုဆိုး JS (11) GABAergic တားစီး raclopride နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography ။ J ကို neuroscience 12: 3773-3780 ။
Dewey SL, မော်ဂန် AE, Ashby CR Jr က Horan B, Kushner လုပ် SA, Logan J ကို, Volkow ND, မုဆိုး JS, Gardner EL, Brody JD (1998) ကိုကင်းစွဲ၏ကုသမှုများအတွက်တစ်ဦးကဝတ္ထုမဟာဗျူဟာ။ synapses 30: 119-129 ။
Dewey SL, Brody JD, Gerasimov က M, Horan B, Gardner EL, Ashby CR Jr (1999) နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏ကုသမှုများအတွက်တစ်ဦးက pharmacologic မဟာဗျူဟာ။ synapses 31: 76-86 ။
Dringenberg HC, Vanderwolf CH (1997) Neocortical activation: ဗဟို cholinergic နှင့် serotonergic စနစ်များပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်မျိုးစုံလမ်းကြောင်းများကမော်ဂျူ။ Exp ဦးနှောက် Res 116: 160-174 ။
El-Ghundi M၊ George SR, Drago J, Fletcher PJ, Fan T, Nguyen T, Liu C, Sibley DR, Westphal H, O'Dowd BF (1998) dopamine D1 receptor ဗီဇဖော်ပြချက်အားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသည်အရက်ကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုလျော့နည်းစေသည်။ EUR J ကို Pharmacol 353: 149-158 ။
21 ။ Epping-ဂျော်ဒန်လွှတ်တော်အမတ်, Watkins အက်စ်အက်စ်, Koob gf, Markou တစ်ဦးက (1998) နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် function ကိုအတွက်ပြဇာတ်လျှောက်လျော့နည်း။ သဘာဝတရား 393: 76-79 ။
ကူးတို့ R ကို, တန်က F, Maxwell R ကို (1972) ကြွက်နှောက် cortex ချပ်, ကြွက်နှောက် cortex ၏ synaptosomal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, hypothalamus နှင့် striatum သို့နှင့် adrenergic အာရုံကြောသို့ catecholamines ၏လွှာမှတားစီးဖို့စိတ်ကြွဆေး, deoxyperadrol နှင့် methylphenidate ၏ isomers များ၏စွမ်းရည်များ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် ယုန် aorta ၏။ J ကို Pharmacol 14: 47-59 ။
Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Schuster CR, Javaid J ကို, Hatano Y ကို, Davis က J ကို (1985) ထူးခြားသောသည်းခံစိတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကင်း၏နှလုံးသွေးကြောနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 235: 677-682 ။
Glowa JR, ဆန် KC, Matecka: D, Rothman RB (1997) Phentermine / fenfluramine မျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ NeuroReport 8: 1347-51 ။
cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ S ကိုပေးသနား, လန်ဒန် ED, NEWLINE DB, Villemagne VL, လျူက X, Contoreggi ကို C, Phillips က RL, Kimes AS, Margolin တစ်ဦးက (1996) Activation ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 93: 12040-12045 ။
အဆိုပါ mediodorsal- prefrontal မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်. ကြွက်များတွင် mediodorsal thalamic နျူကလိယ၏ afferent ဆက်သွယ်မှု၏ Groenewegen HJ (1988) အဖွဲ့။ neuroscience 24: 379-431 ။
27 ။ Groenewegen HJ, Berendse HW, Wolters JG, Lohman က AH (1990) ကို striatopallidal စနစ်, thalamus နှင့် amygdala အတူ prefrontal cortex ၏ခန္ဓာဗေဒကြားဆက်ဆံရေး: တစ်အပြိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ prog ဦးနှောက် Res 85: 95-116 ။
Haber SN လူ့အတွက် (1986) Neurotransmitters နှင့် nonhuman မျောက် Basal ganglia ။ Hum Neurobiol 5: 159-168 ။
Haber SN, Kunishio K ကို Mizobuchi M က, Lynd-Balta အီး (1995) ကမျောက် Basal ganglia မှတဆင့်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal circuit ကို။ J ကို neuroscience 15: 4851-4867 ။
Heimer L ကို, Alheid gf, Zaborzky L ကို (1985) က Basal ganglia ။ ခုနှစ်တွင်: အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (Paxinos, G, ed), စစ 37-74 ။ Sidney: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
Heinz တစ်ဦးက, Ragan P ကို, ဂျုံးစ် DW, Hommer: D, Williams ဟာ W က, Knable ကို MB, Gorey JG, Doty L ကို, Geyer ကို C, Lee က KS, Coppola R ကို, Weinberger DR, Linnoila M (1998) ရက်အတွက်ဗဟို serotonin ပို့ဆောင်ရေးလျှော့ချ။ နံနက် J ကို Psychiat 155: 1544-1549 ။
ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချအပေါ်မီတာ-chlorophenylpiperazine ၏ Hommer: D, Andreasen P ကို, ရီယို: D, Williams ဟာ W က, Ruttimann ဦး, Momenan R ကို, Zametkin တစ်ဦးက, ရောလ် R ကို, Linnoila M (1997) အကျိုးသက်ရောက်မှု: အရက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များတစ် positron ထုတ်လွှတ် tomographic နှိုင်းယှဉ် ။ J ကို neuroscience 17: 2796-2806 ။
လူ့ဂန္ထဝင်အေးစက်အတွက် Hugdahl K ကို Berardi တစ်ဦးက, Thompson က WL, Kosslyn သည် SM, Macy R ကို, Baker DP, Alpert မိုင်, LeDoux je (1995) ဦးနှောက်ယန္တရားများ: တစ်ပေသွေးစီးဆင်းမှုလေ့လာမှု။ NeuroReport 6: 1723-1728 ။
အမဲလိုက်ခြင်း WA (1983) GABAergic ဂီယာအပေါ်အီသနောများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 7: 87 ။
obsessive-compulsive ရောဂါတစ် neuroanatomy ဆီသို့ Insel TR (1992) ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiat 49: 739-744 ။
ဣဇာက်သည် WL, Nonneman AJ, Neisewander J ကို, Landers T က, Bardo MT (1989) Prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည် differential ကိုကင်း-အားဖြည့်သောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုနှောင့်အယှက်ပေမယ့်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်ဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience 103: 345-355 ။
37 ။ ↵
မျောက်များ၏ Basal ganglia, septum နှင့် diencephalon ဖို့ prefrontal cortex ၏ behaviorallydefined ကဏ္ဍများကနေဂျွန်ဆင် T က, Rosvold သူ, Mishkin M (1968) ပရောဂျက်။ J ကို Exp Neurol 21: 20-34 ။
38 ။ ↵
ဂျွန်ဆင် TN (1971) ကို globus pallidus နှင့်မျောက်အတွက် precommissural caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက်ရွေးချယ်ထားရှိတွေ့ရှိရပါသည်၏ substantia nigra အတွက်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်စီမံကိန်းများ။ Exp Neurol 33: 584-596 ။
39 ။ ↵
Koob gf, မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ Bloom FE (1988) ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ 242: 715-723 ။
40 ။ ↵
သည် Le Moal က M ရှိမုန် H ကို (1991) Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းမှတ်စုများ။ Physiol ဗြာ 71: 155-234 ။
41 ။ ↵
Lewis က MJ (1996) အရက်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် neuropharmacological ဟော်မုန်း။ အရက်အရက်ပျော့ပျောင်း 1: 17-25 ။
42 ။ ↵
Lingford-Hughes AR, Acton PD, Gacinovic S က, နို့စို့ J ကို, Busatto gf, Boddington SJ, Bullmore အီး, Woodruff PW, ကော်စတာ, DC, Pilowsky LS, ELL PJ, မာရှယ် EJ, Kerwin RW (1998) အရက်ထဲမှာ GABAbenzodiazepine အဲဒီ receptor ၏လျှော့ချအဆင့်ဆင့် မီးခိုးရောင်ကိစ္စကျုံ့၏မရှိခြင်းအတွက်မှီခို။ br J ကို Psychiat 173: 116-122 ။
43 ။ ↵
Loh သည် EA ၏, ရောဘတ်, DC (1990) ကိုချိုး-အချက်များ forebrain serotonin တွေပျက်စီးမှုကိုအောက်ပါသွေးကြောသွင်းကင်းတိုးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်မယ့်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားပေါ်မှာ။ Psychopharmacology (ဘာလင်) 101: 262-266 ။
44 ။ ↵
ဒကယ်, Kaufman MJ (1994) ကင်းဃအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် dopamine အတွက်မျောက်ဦးနှောက်၏ကြွယ်ဝသောဒေသများစုဆောင်း: mazindol ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ synapses 18: 261-275 ။
45 ။ ↵
Marsden CD, Obeso JA (1994) Basinson ganglia နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် stereotaxic ခွဲစိတ်မှု၏ဝိရောဓိ။ ဦး နှောက် 117: 877-897 ။
46 ။ mc Alonan, GM က, Robbins TW, Everitt BJ medial dorsal thalamic ၏ (1993) အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူအပေါ် ventral pallidal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်: ဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များအတွက် ventral striatopallidal စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ neuroscience 52: 605-620 ။
47 ။ ↵
McKay JR (1999) အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှ relapse အတွက်အချက်များ၏လေ့လာရေး: နည်းစနစ်များနှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုတစ်ဦးဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ J ကိုလုံးအရက်သောက် 60: 566-576 ။
48 ။ ↵
Model JG, Mountz JM, Curtis, G, obsessive compulsive ရောဂါတစ် pathogenetic ယန္တရားအဖြစ် Basal ganglia / limbic striatal နှင့် thalamocortical ဆားကစ်အတွက် Greden J ကို (1989) Neurophysiologic ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Neuropsychiat 1: 27-36 ။
49 ။ ↵
Model JG, Mountz J ကို, Beresford TP (1990) Basal ganglia / limbic striatal နှင့်တဏှာနှင့်အရက်ထဲမှာထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအတွက် thalamocortical ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို Neuropsychiat 2: 123-144 ။
50 ။ Nauta WJH (1971) ကိုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ပြဿနာ: တစ်အဓိပ္ပာယ်။ J ကို Psychiat Res 8: 167-189 ။
51 ။ ↵
Nordstrom AL အလယ်ပိုင်း၏ Farde L ကို, Pauli S က, Litton je, Halldin ကို C (1992) ပေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [11C] ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများနှင့် schizophrenic လူနာ, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်ဆိုးကျိုးများအတွက် binding raclopride ။ Hum Psychopharmacol 7: 157-165 ။
52 ။ ↵
Oades RD, Halliday GM က (1987) Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology ။ 1 ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res 434: 117-65 ။
53 ။ ↵
O'Brien CP၊ Childress AR၊ Ehrman R, Robbins SJ (၁၉၉၈) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းရင်းများ Psychopharmacology 1998: 12-15 ။
54 ။ ↵
Pontieri FE, Tanda, G, Orzi က F, Di Chiara, G နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးသူတို့အားတူညီမှုအပေါ်နီကိုတင်း၏ (1996) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သဘာဝတရား 382: 255-257 ။
55 ။ ↵
Porrino LJ, လီယွန်: D (2000) Orbital နှင့် prefrontal cortex နဲ့ psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု medial: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများ။ Cereb Cortex 10: 326-333 ။
56 ။ ↵
Portenoy RK, Jarden Jo, Sidtis JJ, Lipton RB, Foley KM, Rottenberg DA (1986) compulsive thalamic Self-stimulation: ဇီဝဖြစ်စဉ်, electrophysiologic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုနဲ့အမှု။ နာကျင်မှု 27: 277-290 ။
57 ။ ↵
ကုသမှုခံယူရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု Ramirez LF, မက်ကော်မစ် RA, Russo လေး, Taber JI (1983) ပုံစံများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 8: 425-428 ။
58 ။ ↵
ray JP, စျေး JL (1993) Orbital ဖို့ thalamus ၏ mediodorsal နျူကလိယကနေစီမံကိန်း၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဟာ Macaque မျောက်အတွက် prefrontal cortex medial ။ comp Neurol 337: 1-31 ။
59 ။ ↵
Rocha BA, Fumagalli က F, Gainetdinov RR, dopaminetransporter နောက်ကောက်ကြွက်တွေအတွက်ဂျုံးစ် SR, Ator R ကို, Giros B, Miller က GW, caron MG (1998) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ သဘာဝတရား neuroscience 1: 132-137 ။
60 ။ ↵
Rolls ET (1996) က orbitofrontal cortex ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 351: 1433-1443 ။
61 ။ ↵
Ross က SB, Jackson က DM (1989) Vivo အတွက် mouse ကိုအတွက် 3H raclopride များစုစည်းနေခြင်း၏ Kinetic ဂုဏ်သတ္တိများ။ Naunyn Schmiederbergs Arch Pharmacol 340: 6-12 ။
62 ။ ↵
ဦးနှောက်ပုံရိပ်များအတွက် Saha GB ကို, MacIntyre WJ, Go ကို RT ကို (1994) Radiopharmaceuticals ။ seminal Nucl Med 24: 324-349 ။
63 ။ ↵
အဆိုပါ mediothalamic စနစ်၏စဉ်ဆက်မပြတ် Self-stimulation နှင့်အတူ Schmidt က B, ရစ်ချတာ-Rau, G, Thoden ဦး (1981) စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ။ Arch Psychiat Nervenkr 230: 55-61 ။
64 ။ ↵
Schoenbaum, G, Chiba AA ကို, Gallagher M (1998) Orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အန်ကုက်လုပ်ပါလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းရလဒ်များမျှော်မှန်းထားသည်။ သဘာဝတရား neuroscience 1: 155-159 ။
65 ။ ↵
1989H raclopride ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Seeman P ကို, ဂွမ် HC, Niznik HB (2) Endogenous dopamine အဆိုပါ dopamine D3 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ: လူ့ဦးနှောက်၏ positron ထုတ်လွှတ် tomography များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ synapses 3: 96-97 ။
66 ။ ↵
Stuss ၎င်းကို, Benson DF (1986) ကတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး။ နယူးယောက်: Raven နှိပ်ပါ။
67 ။ ↵
Thorpe SJ, Rolls ET, Madison S ကို (1983) က orbitofrontal cortex: အပြုမူမျောက်အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ Exp ဦးနှောက် Res 49: 93-115 ။
68 ။ ↵
ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက်၏ Thut, G, Schultz W က, Roelcke ဦး, Nienhusmeier M က, Missimer J ကို, Maguire RP, Leenders KL (1997) Activation ။ NeuroReport 8: 1225-1228 ။
69 ။ Tremblay L ကို, Schultz ဒဗလျူ (1999) မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်ဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝတရား 398: 704-708 ။
70 ။ ↵
Tucker DM, Luu P ကို, Pribram KH (1995) လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ selfregulation ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 769: 213-239 ။
71 ။ ↵
Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Hitzemann R ကို, Dewey က S, Bendriem B, Alpert R ကို, Hoff တစ်ဦးက (1991) ကိုကင်းမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်ပြောင်းလဲ။ နံနက် J ကို Psychiat 148: 621-626 ။
72 ။ ↵
Volkow ND, Hitzemann R ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Dewey SL (1992) Long-term တိုကျရိုကျဦးနှောက်ကိုကင်းချိုးဖောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကို။ synapses 11: 184-190 ။
73 ။ ↵
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer: D, Dewey က S, Wolf ကအေပီ (1993a) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည် dopamine လျော့နည်းသွားသည်။ synapses 14: 169-177 ။
74 ။ ↵
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding 1993C raclopride ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Dewey SL, Schlyer: D, MacGregor R ကို, Logan J ကို, Alexoff: D, Shea ကို C, Hitzemann R ကို, Angrist N ကို, Wolf ကအေပီ (11b) Reproducibility ။ J ကို Nucl Med 34: 609-613 ။
75 ။ ↵
Volkow ND, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Pappas N ကို, Biegon တစ်ဦးက, Dewey SL (1993c) အရက်သမားအတွက် inhibitory neurotransmission မှနှောက်တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ နံနက် J ကို Psychiat 150: 417-422 ။
76 ။ ↵
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Schlyer: D, Hitzemann R ကို, Lieberman J ကို, Angrist B, Pappas N ကို, MacGregor R ကို, Burr, G, Cooper က T က, Wolf ကအေပီ (1994) [11C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင် Imaging လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ။ synapses 16: 255-262 ။
77 ။ ↵
Volkow ND, Ding YS, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Logan J ကို, Gatley SJ, Dewey SL, Ashby ကို C, Lieberman J ကို, Hitzemann R ကို, Wolf ကအေပီ (1995) ကိုကင်းများကဲ့သို့ methylphenidate လား? လူ့ဦးနှောက်မှာသူတို့ရဲ့ pharmacokinetics နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်လေ့လာရေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiat 52: 456-463 ။
78 ။ ↵
Volkow ND, Ding YS, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ (1996a) ကိုကင်းစွဲ: ပေနှင့်အတူပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာယူဆချက်။ J ကိုစွဲ dis 15: 55-71 ။
79 ။ ↵
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Hitzemann RJ, Ding YS, Pappas NS, Shea ကို C, Piscani ငွေကျပ် (1996b) dopamine receptors အတွက်မဟုတ်အရက်သမားအတွက် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin Exp Res 20: 1594-1598 ။
80 ။ ↵
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Hitzemann R ကို, ချန်အေဒီ, Pappas N ကို (1997a) detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝတရား 386: 830-833 ။
81 ။ ↵
Volkow ND, ဝမ် GJ, ယေဘုယျအား je, Hitzemann R ကို, မုဆိုး JS, Pappas N ကို, Frecska အီး, Piscani ငွေကျပ် (1997b) အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းအရက် detoxification စဉ်အတွင်းအရက်သမားအတွက် lorazepam မှဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု။ အရက် Clin Exp Res 21: 1278-1284 ။
82 ။ ↵
ဝမ် GJ, Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, MacGregor R ကို, Shea အီး, Shyler: D, Hitzemann R ကိုလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ extrastriatal dopamine receptors imaging နှစ်ခုပေ radioligands ၏ (1993) နှိုင်းယှဉ်။ synapses 15: 246-249 ။
83 ။ ↵
ဝမ် GJ, Volkow ND, မုဆိုး JS, Cervany P ကို, Hitzemann RJ, Pappas N ကို, Wong ကမှန် CT, ယခင်မူးယစ်ဆေးဝါးအတှေ့အကွုံပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းတဏှာစဉ်အတွင်း Felder ကို C (1999) ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို Activation ။ ဘဝကသိပ္ပံ 64: 775-784 ။
84 ။ ↵
အဆိုပါ mediodorsal thalamic နျူကလိယ၏ Weissenborn R ကို, Whitelaw RB, Robbins TW, Everitt BJ (1998) Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology (ဘာလင်) 140: 225-232 ။
85 ။ ↵
Yeager RJ, DiGiuseppe R ကို, Resweber PJ, သန်းနာတာရှည်လူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး profile များကိုနှင့်အထွေထွေပြင်ပလူနာလူဦးရေရဲ့အရွက် R ကို (1992) နှိုင်းယှဉ်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 71: 71-79 ။
86 ။ ↵
Young က CD ကို, Deutch AY (1998) ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အပေါ် thalamic paraventricular နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 60: 753-758 ။